The Panspermia theory gịnị bụ mbido ndụ? | Network Meteorology
Mmalite nke ndụ. Nye na-enwetụbeghị echiche banyere ya? E nwere ọtụtụ echiche na-agba ọsọ ma na ndị ọkà mmụta sayensị, yana yana na ịntanetị na site n'okwu ọnụ nke ọtụtụ ijeri ndị bi n'ụwa. Otu n’ime echiche dị ịtụnanya banyere mmalite mmadụ bụ echiche Panspermia. Nụtụla banyere ya? Ọ bụ tiori gbadoro ụkwụ na mmadụ nwere ike inwe mmalite ọzọ dị iche na nke mbara ụwa a. Nke ahụ bụ, anyị nwere ike isi n'akụkụ ọzọ nke eluigwe na ala pụta.
You nwere ike iche na agbụrụ mmadụ esiteghị na ụdị nke ọzọ nke ụdị Homo mgbe mgbanwe na-abịa site n'akụkụ ọzọ nke eluigwe na ala? Na nke a, anyị na-agwa gị ihe niile gbasara echiche Panspermia.
1 Kedu ihe echiche Panspermia gbadoro ụkwụ?
2 Ofdị Panspermia
3 Mme mbụme
4 Detractors na-agbachitere
Kedu ihe echiche Panspermia gbadoro ụkwụ?
Ozizi a na-eche na enwere ike ịtụrụ ime anyị n’akụkụ ọzọ nke nnukwu ụwa (ma ọ bụ enweghị oke dịka ọtụtụ ndị sayensị na-ekwu). Onwere otutu echiche na uzo anyi puru isi bia. Dị ka ọ na-amụ ihe karịrị oge, ọ bụ ihe na- anyi agaghi amata ogo nke 100%.
Na Panspermia, ekwuru na mmadụ nwere ike ịbụ anụ ahụ mepụtara n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa na mkpụrụ ndụ ihe nketa ya abanyela na mbara ụwa site na comets ma ọ bụ meteorites metụtara na ụwa. O kwere omume na, n'ụzọ dị otú a, a pụrụ ịkọwa mkpa ọ na-eto eto ịchọ ịma ihe na-eme na mpụga mbara ụwa.
Kemgbe sayensị na mbara igwe amalitela, ụmụ mmadụ na-achọsi ike ịmata ihe ndị dị na mbara ụwa anyị. Yabụ, gbalịa ime njem gaa ọnwa, Mars ma ọ bụ ịmata ụdị mbara ala ndị nwere ọtụtụ n’ime anyị Usoro anyanwụ dị ka n'ofe the Oort Cloud. Ikekwe ihe a niile sitere na mkpa "ịla n'ụlọ."
Ọ bụkwa na nkwupụta a na-eche na ndụ mmadụ erutela ụwa throughwa site na ụdị microscopic dị ndụ nke gaara etolite ekele maka ọnọdụ obibi nke ụwa anyị. Anyị enweela ike ịpụta site na mbara igwe n'ihi mmetụta nke meteorites na comets. ozugbo emere na mbara ala, evolushọn mere ka mmadụ too dị ka anyị si mara ya taa.
E nwere ọtụtụ ụdị Panspermia nke ụfọdụ ndị ọkà mmụta sayensị na-agbachitere dị ka mmalite nke ndụ n’ụwa. A maara ya dị ka Panspermia Eke na Nduzi. Anyị ga-enyocha nke ọ bụla n'ime ha iji ghọta njirimara ha nke ọma.
Ọ bụ nke ọ na-agbachitere na ndụ niile nke kpụrụ n’elu ụwa enweghị isi na nkịtị. Ọzọkwa, ihe na-akpata ya bụ nkume ndị jikọtara ọnụ n’elu ala nwere ihe ndị dị ndụ. Etwa mbara ala dị na mpaghara "ibi na mpaghara" nke sistemu anyanwụ. Ya mere, n'ihi ọnọdụ gburugburu ebe obibi, ọ nwere ike ijide mmiri na ọnọdụ okpomọkụ.
Ọzọkwa, oyi akwa nke ikuku ha na-echebe anyị pụọ na radieshon na-emerụ ahụ sitere na Sun. Ọ bụ maka nke a na ndụ dị na mbara ụwa enweela ike ịzụlite.
Ofdị echiche a bụ maka ndị nwere obi ike ma na-akpa nkata. Na izu ọjọọ ahụ bụ ihe jupụtara na tiori nke nde mmadụ bi na Earth. Ọ bụ iche echiche banyere ihe ihe niile mere na evolushọn na ndụ mmadụ nwere ihe kpatara ya. Nke ahụ bụ, usoro nke meteorite ma ọ bụ comet metụtara na ụwa na microorganisms nwere ike imepụta ndụ mmadụ na-eduzi mmadụ.
N'echiche a, anyị nwere ike ịsị na ntụzịaka Panspermia bụ nke ndụ mmadụ nọ na waswa na-amanye ma ọ bụghị usoro enweghị usoro. E kewara echiche a n’etiti ndị chere na e mere nke a iji kee ihe dị ndụ n’ụwa na ndụ na ndị chere na ụwa anyị nwere ike ịga mba ofesi ịga n’ihu na-eme ihe dị mkpa na ụwa ndị ọzọ nke kpakpando ndị ọzọ dị anya.
Ọ bụ nzuzu iche na mbido ndụ na ụwa bụ ihe echere. Na nzube dị a ?aa? Nke ahụ bụ, na ebe ndụ ọgụgụ isi dị na mbara ala ndị ọzọ dị anya, gịnị kpatara ha ga-eji ziga ihe dị ndụ iji gaa ebe dị anya? Ọ ga - ekwe omume na mbara ụwa bụ naanị mbara ụwa bi na nnukwu mpaghara ma ọ bụ ya mere ha ji banye na ya?
Enwere ọtụtụ ajụjụ na-enye ụdị echiche a. Ọ bụkwa na mbido ndụ bụ ihe, n'agbanyeghị agbanyeghị ọtụtụ ndị sayensị na-amụ, anyị enweghị ike ịmata 100%, ebe ọ bụ na "ọ nweghị onye nọ ebe ahụ ịkọ maka ya." Dị ka ị gaghị amata ihe bụ mgbe ọnwụ gasịrị, anyị enweghị ike ịlaghachi ma mara ihe mbụ dị na mmalite nke oge.
Otu n’ime eziokwu ndị na-eme ka nkwupụta a chee na ọ bụ eziokwu bụ ịdị adị nke ihe ndị dị ndụ nwere ike ịdị ndụ na mbara igwe. Nke ahụ bụ, ha bụ microorganisms nke enweghị ike ndọda ma ọ bụ oxygen na-adịghị emetụta. Fọdụ na-eche na ọtụtụ n'ime oghere ihe dị ka Emere njem Voyager maka ụmụ mmadụ ịgbasa "mkpụrụ" ahụ na ebe ndị ọzọ na mbara igwe ma ọ bụ iji soro ndị zitere anyị ebe a kwurịta okwu.
Enwere ndị na-agbachitere ya na ndị na-ekwuchitere ya maka echiche a. Ndị nke a bụ ndị na-eche na ntule dị ndụ enweghị ike ịlanarị mmetụta nke meteorite na ụwa. Nke mbụ, mgbe anyị nwetara ikuku, oké mgbanwe ọnọdụ okpomọkụ na-egosi na ọ dịghị ihe ọ bụla anyị maara banyere mbara ala anyị pụrụ ịnwụ.
Yabụ, ịgbaso usoro izizi a, ibi n'ụwa, ị ga-ahụ ọnọdụ ụwa, yabụ ọ nweghị ike ịnagide mmetụta dị otu a.
Ihe ọ bụla ọ bụ, Panspermia bụ ihe ọzọ n’ime ọtụtụ nchepụta dị n’ọdịdị nke ndụ n’elu ụwa. Gị onwe gị, ị̀ maara echiche ọzọ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » The Panspermia theory gịnị bụ mbido ndụ?